Qarax miino oo labo sarkaal oo miino baaris ah oo katirsanaa ciidanka Puntland ku dilay Buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandQarax miino oo labo sarkaal oo miino baaris ah oo katirsanaa ciidanka Puntland ku dilay Buuraha Galgala
March 14, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Baabuurta gaashaaman ee ciidanka PMPF ee Buuraha Galgala. [Sawirka]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo askari oo ah khabiiro miino baaris oo katirsanaa ciidamadda Puntland ayaa lagu dilay qarax miino wadada lagu aaso ah oo ka dhacay Buuraha Galgala ee gobolka Bari maanta oo Arbaco ah, sida sarkaal katirsan ciidanka ammaanka uu sheegay.
Sarkaal katirsan ciidanka ammaanka Puntland, oo codsaday in magaciisa aan la sheegin, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in labada khabiir oo miino baarista ahaa ay ku dhinteen kadib markii bumbada wadada lagu aaso ah oo ay furfurayeen ay ku qaraxday.
Labada sarkaal ee dhintayaa ayaa katirsanaa ciidanka PMPF iyo ciidanka PSF, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa mar walba dhigta wadada miinada Buuraha Galgala, halkaas oo ciidanka Puntland ay kula dagaalamayaan maleeshiyadooda.